လေနုအေး: ကျွန်မ သို့ မဟုတ် ပြည်သူ ချစ်သော မင်းသား
Posted by တန်ခူး at 3:35 PM
ပြည်သူချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေ မိမိတတ်စွမ်းတဲ့ အနုပညာနဲ့ လူအများအတွက် အကျိုးရှိမယ့် အလုပ်မျိုးကို လုပ်တာမျိုး မကြာခဏတွေ့ရတတ်ပေမယ့် ကျော်သူလုပ်သလောက် အတိုင်းအတာအထိ လုပ်တဲ့လူတော့ သိပ်မများလှဘူး။
အင်းဗှာ။ ကျော်သူက သရုပ်ဆောင်လဲကောင်းတယ်။ သမိုင်းလည်း လှသွားပြီ။ ပြည်သူ့ မေတ္တာကိုလဲ သိမ်းကျုံးပြီးယူသွားပြီ။ အနုပညာရှင်တိုင်း အဲလို မျိုးဆို ကောင်းမယ်ဗျာ။
တို့တွေ ငယ်ငယ်တုန်းက ဦးကျော်သူကို စပြီး ကြည့်မိတာ “ချစ်ကြိုးလေးတစ်မျှင်”ကားမှာပေါ့။ တန်ခူးရေးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေလည်း အားလုံးကြိုက်တယ်။ အကြိုက်ဆုံးက “မုန်းရခက်ကြီး”ကားပဲ။ ရီရလို့လေ။ ဦးကျော်သူ အကယ်ဒမီမရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ ရသင့်ရဲ့သားနဲ့ မရဘူးပေါ့လေ။ နောက် မထင်မှတ်ပဲ နာရေးကူညီမှုအသင်း ကိုတည်ထောင်လိုက်တော့ ပိုပြီး လေးစားမိတယ်။ ပြည်သူတွေအပေါ်ကို ပါးစပ်က တာဝန်ကျေတာမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ကျကျ တာဝန်ကျေတာပါ။ စေတနာထားတာပါ။ တကယ်ကို ရှားမှ ရှားတဲ့ မင်းသား။
တကယ်ကို ချီးကျူးစရာတောင်းတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ တန်ခူးရေ... ပါရမီဖြည့်ဘက်ကလဲ အစစ်အမှန်...
သတိတရနဲ့ပိုစ့်လေးရေးထားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
တန်ခူးဆီကို နေ့ တိုင်းရောက်ပါတယ်။
အသစ်မတွေ့ ရင်လဲ အဟောင်းတွေဖတ်ပြီးပြန်တာပေါ့။
ရုံးမှာ PC အသစ်လဲထားတော့ မြန်မာစာလုံး ရုတ်တရက် မရတာမို့Comment မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။
တန်ခူးရေ... ကိုကျော်သူက တကယ်ကို ချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ
ကျနော်ငယ်ငယ်က ရုပ်ရှင်ဆို ကျော်သူ မို့မို့မြင့်အောင်ခေတ် ။ ကြာသာပတေးနေ့ည တို့
သော ကြာညတို့ဆို ကျနော်တို့ မိသားစု ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်ကြတယ် ။
မေးစရာတော့ မလိုတော့ပါဘူးနော် ကိုကျော်သူ့ ကားဆိုတာ ။
အရမ်း လူသား ပီသတယ် လို့ ပြောရမယ် ။ သူ လုပ်ဆောင်တာတွေကို
ချီးကျူးတာ ကျနော့် စကားတွေက ပြည့်စုံလုံလောက်မယ် မထင်ပါဘူး။
သူက တကယ့်ကို လေးစား အားကျဖွယ် ပုဂ္ဂိုလ်ကျော် တစ်ယောက်ပါ ။
ခုလို ကိုကျော်သူ့ကို အမှတ်တစ်ရ တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တန်ခူးရေ ။
ူကိုကျော်သူကိုဒီ post လေးပေးဖတ်ချင်လိုက်တာ,,,ကိုကျော်သူရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စေတနာ..မွန်မြတ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ချက်တွေကို..ဒီ post လေးနဲ့ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုလိုက်တဲ့တန်ခူးကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ချီးကျူးပါတယ်....
မတန်ခူး ပြောတာတွေ သဘောတူတယ်
သူက တကယ်ကို လေးစားစရာကောင်းပါတယ်။ သူလိုအနုပညာရှင်တွေ များသထက် များလာပါစေ။
ဇာဂနာ ကို ဖမ်းသွားတော့ ကျော်သူ့ကို စိတ်ပူနေရပီ..နော်..
တန်ခူးလိုမျိုး ဦးကျော်သူကို အားပေးခဲ့တာ။
ကိုကျော်သူ ဆက်လက်ပြီး ခုလိုလူတွေကို ကူညီနိုင်ပါစေလို့ မလေးလဲဆုတောင်းပါတယ်..။
ဒါနဲ့လေ … မလေး တို့ အဖြူစိမ်းဘ၀က အဲဒီမင်းသား၂ဦးပြိုင်တက်လာတာလေ အတန်းထဲမှာ စိုးသူအုပ်စုရယ် ကျော်သူအုပ်စုရယ် ရင်ဘတ်မှာ သူတို့ပုံပါတဲ့ အ၀ိုင်းရင်ထိုးတွေ တပ်ပြီး ကောင်မလေးတွေ အုပ်စုတွေကွဲတုန်းက မလေးတော့ ဘယ်အုပ်စုထဲမှ မပါဘူးသိလား မ..
ဟဲဟဲ… သုမောင်တို့ ဇော်ဝမ်းတို့ မို့လို့ပါ။
ဦးကျော်သူ ကို စက်တင်ဘာထဲက စပြီး လေးစားသွားတယ် အရင်ထဲကလည်း အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့အားပေးနေကြ အခုဆို ပိုပိုပြီး လေးစားလာပြီး ။
ဟုတ်ပါတယ်ကိုပေါရေ…သူ့ စေတနာတွေက လေးစားစရာပါ….
အနုပညာရှင်တိုင်း အဲလိုဖြစ်လာပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကောင်းကင်ကိုရေ….
အဲဒါဆို နုနဲ့ တို့ အကြိုက်ချင်းတူတာပေါ့နော်…
ဟုတ်တယ်သက်ဝေရေ…သူတို့ စုံတွဲက စံပြပါ…တန်ခူးဆီနေ့ တိုင်းလာလည်တာ ကျေးဇူးနော်…
ကိုတာတူးရေ…ကျွန်မလဲ ကျော်သူ၊မို့ မို့ မြင့်အောင်ကားဆို မလွတ်တမ်းအားပေးခဲ့တာ…
ဟုတ်တယ်ပန်ရေ…သူလိုလူတွေများလာပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်….
သုနှင်းဆီရေ…ကိုကျော်သူ့ ပရိသတ်တွေပေါ့နော်…ခုလိုလာလည်တာကျေးဇူးပါ..နောင်လဲအမြဲလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်….
အိမ့်ရေ…ဟုတ်တယ်နော်…အဲဒီတုန်းက တို့ တွေကကျော်သူgroup…ဒါပေမယ့်ရင်ထိုးတော့ မတပ်ဖြစ်ဘူး…သူ့ ခေတ်နဲ့ သူပေါ့နော်…ကော်လိပ်ဂျင်နေ၀င်းတို့ ခေတ်တုန်းက ကော်လိပ်ဂျင်နေ၀င်းကို အကြိုက်ဆုံး၊ သုမောင်၊ဇော်ဝမ်းခေတ်ရောက်တော့လဲ ကြိုက်တာပဲ…ဇော်ဝမ်းဆို ခုထိကြည့်တုန်း…ဒါပေမယ့် အသက်ရလာတော့ စိုင်းစိုင်းတို့ ရဲလေးတို့ မကြိုက်တတ်တော့ဘူး….
မောင်မျိုးရေ…လေးစားလောက်တဲ့သူ့ သမိုင်းပါ… ခုလိုလာလည်တာကျေးဇူးပါ..နောင်လဲအမြဲလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်….
Thank you so much for the note. It'sashame that we just found out fromafriend of us. we'd love to share it on Kyaw Thu Fan Page and request for your approval. We would also like to credit to your pen name and your blog. Thanking you in advance.
Kyaw Thu Page Admin Team